Onyankopɔn ‘Akyɛde a Enni Kabea’ | Adesua
KENKAN WƆ Afrikaans Aukan Baoule Bassa (Cameroon) Bislama Boulou Cakchiquel (Western) Cambodian Chitonga Chol Cibemba Cinyanja Dangme Drehu Efik English Ewe Fon French Ga Garifuna Greenlandic Hausa Hmong (White) Iban Igbo Isoko Italian Karen (S'gaw) Kazakh Kikaonde Kikongo Kiluba Kimbundu Kisi Kisonge Kongo Krio Kwangali Kwanyama Laotian Lingala Lunda Luvale Maltese Mam Mambwe-Lungu Mauritian Creole Mazatec (Huautla) Mende Mizo Myanmar Nahuatl (Central) Nahuatl (Guerrero) Nahuatl (Huasteca) Nahuatl (Northern Puebla) Ndebele Ndonga Ngabere Ngangela Nyaneka Nzema Otetela Pidgin (Cameroon) Portuguese Quechua (Ancash) Quechua (Ayacucho) Quechua (Cuzco) Quichua (Imbabura) Saramaccan Sepedi Sesotho (Lesotho) Seychelles Creole Silozi Spanish Swahili (Congo) Swati Tahitian Tiv Tlapanec Tojolabal Totonac Tshiluba Tsonga Tswana Twi Umbundu Urhobo Uruund Venda Wallisian Wayuunaiki Welsh Xhosa Yoruba Zulu
“Aseda nka Onyankopɔn wɔ n’akyɛde a enni kabea no ho.”—2 KORINTOFO 9:15.
NNWOM: 121, 63
Dɛn na Kristo dɔ no kanyan yɛn ma yɛyɛ?
Ɔkwan bɛn so na Onyankopɔn dɔ kanyan yɛn ma yɛdɔ yɛn nuanom?
Adɛn nti na ɛsɛ sɛ bɔne a Onyankopɔn de firi no kanyan yɛn ma yɛde yɛn nuanom bɔne firi wɔn?
1, 2. (a) Onyankopɔn ‘akyɛde a enni kabea’ no yɛ dɛn? (b) Nsɛmmisa bɛn na yebesusuw ho wɔ adesua yi mu?
YEHOWA akyɛde a ɛkyɛn biara a ofi ɔdɔ mu de ama yɛn ne ne Ba, Yesu, a ɔda ne koma so a ɔsomaa no baa asase so no! (Yohane 3:16; 1 Yohane 4:9, 10) Ɔsomafo Paulo kaa saa akyɛde no ho asɛm sɛ ‘akyɛde a enni kabea.’ (2 Korintofo 9:15) Adɛn nti na Paulo kaa saa?
2 Ná Paulo nim sɛ afɔre a Yesu bɔe no yɛ adanse a ɛkyerɛ sɛ Onyankopɔn bɔhyɛ nyinaa bɛbam. (Kenkan 2 Korintofo 1:20.) Eyi kyerɛ sɛ Yesu afɔrebɔ ne Yehowa papayɛ ne adɔe a ɔda no adi kyerɛ yɛn nyinaa ka Onyankopɔn ‘akyɛde a enni kabea’ no ho. Saa akyɛde no som bo araa ma onipa rentumi mfa n’adwene nkyerɛkyerɛ mu nwie. Ɛsɛ sɛ akyɛde soronko yi ma yɛte nka dɛn? Ɔkwan bɛn so na ɛsɛ sɛ akyɛde yi kanyan yɛn ma yesiesie yɛn ho ma Kristo wu Nkaedi a yɛbɛyɛ no Wukuda March 23, 2016?
ONYANKOPƆN AKYƐDE SORONKO
3, 4. (a) Sɛ obi kyɛ wo ade a, ɛka wo dɛn? (b) Ɔkwan bɛn so na akyɛde a edi mũ paa betumi asesa w’asetena?
3 Sɛ obi kyɛ yɛn ade a, yɛkyerɛ ho anigye. Nanso, akyɛde bi wɔ hɔ a edi mũ paa, anaa ɛyɛ soronko koraa ma ebetumi asesa yɛn asetena. Nhwɛso bi ni. Fa no sɛ woadi nsɛmmɔne bi, na ɛho asotwe ne owu. Nanso, mpofirim ara na obi a wunnim no de ne ho mae sɛ wɔmfa asotwe no mma ɔno mmom. Onipa no ayɛ krado sɛ obewu ama wo! Akyɛde soronko a ɛte saa bɛka wo dɛn?
4 Sɛnea onipa no ayi ne yam ayɛ ade kɛse a ɛte saa ama wo no bɛma woayɛ nsakrae wɔ w’asetenam. Afei nso, ebetumi akanyan wo ma woada ayamye ne ɔdɔ adi akyerɛ afoforo, na obiara a ɔne wo anni no yiye no, wode befiri no. Wo nkwa nna a aka nyinaa, wobɛkyerɛ sɛ w’ani sɔ nea onipa no ayɛ ama wo no.
5. Adɛn nti na yebetumi aka sɛ agyede a Onyankopɔn de akyɛ yɛn no sõ sen akyɛde foforo biara?
5 Agyede a Onyankopɔn de ama yɛn no sõ sen akyɛde a yɛaka ho asɛm no koraa. (1 Petro 3:18) Wo de, susuw saa asɛm yi ho hwɛ: Adam de bɔne awo yɛn nyinaa, na bɔne akatua ne owu. (Romafo 5:12) Ɔdɔ kaa Yehowa ma ɔsomaa Yesu baa asase so bewu maa nnipa nyinaa, na ‘ɔkaa owu hwɛe maa onipa biara.’ (Hebrifo 2:9) Nanso afɔre a Yesu bɔe no bɛyɛ nneɛma pii! Ebeyi owu nso afi hɔ koraa. (Yesaia 25:7, 8; 1 Korintofo 15:22, 26) Wɔn a wobenya Yesu mu gyidi nyinaa bɛtena ase asomdwoe mu na wɔanya anigye daa. Ebinom ne Kristo bedi ade sɛ ahemfo wɔ soro, na ebinom nso Onyankopɔn Ahenni no edi wɔn so wɔ asase so. (Romafo 6:23; Adiyisɛm 5:9, 10) Nhyira foforo bɛn na Yehowa akyɛde no de bɛba?
6. (a) Nhyira a Yehowa akyɛde no bɛma yɛanya no mu nea ɛwɔ he na wohwɛ kwan? (b) Kyerɛ nneɛma abiɛsa a Onyankopɔn akyɛde no bɛkanyan yɛn ma yɛayɛ.
6 Nea Onyankopɔn akyɛde no bɛma yɛanya no bi ne sɛ, asase bɛdan paradise, wɔbɛsa ayarefo yare, na wobenyan awufo. (Yesaia 33:24; 35:5, 6; Yohane 5:28, 29) Yɛda Yehowa ne ne Dɔba no ase sɛ wɔama yɛn ‘akyɛde a enni kabea’ yi. Dɛn na saa akyɛde yi bɛkanyan yɛn ma yɛayɛ? Ɛbɛkanyan yɛn (1) ma yɛasuasua Yesu yiye, (2) yɛadɔ yɛn nuanom, na (3) yɛafi yɛn komam de afoforo bɔne akyɛ wɔn.
“ƆDƆ A KRISTO WƆ NO HYƐ YƐN”
7, 8. Ɛsɛ sɛ ɔdɔ a Kristo ada no adi no ka yɛn dɛn, na dɛn na ɛsɛ sɛ ɛkanyan yɛn ma yɛyɛ?
7 Nea edi kan, ɛsɛ sɛ yɛn ani gye ho sɛ yɛbɛbɔ yɛn bra ma ahyɛ Yesu anuonyam. Ɔsomafo Paulo kae sɛ: “Ɔdɔ a Kristo wɔ no hyɛ yɛn.” (Kenkan 2 Korintofo 5:14, 15.) Ná Paulo nim sɛ, sɛ yegye ɔdɔ kɛse a Yesu ada no adi akyerɛ yɛn no tom a, ɛbɛhyɛ yɛn, anaa ɛbɛkanyan yɛn ma yɛadɔ Yesu na yɛahyɛ no anuonyam. Nokwasɛm ne sɛ, sɛ yɛte nea Yehowa ayɛ ama yɛn no ase yiye a, ɔdɔ a Yehowa ada no adi akyerɛ yɛn no bɛkanyan yɛn ma yɛabɔ yɛn bra de ahyɛ Yesu anuonyam. Ɔkwan bɛn na yɛbɛfa so ayɛ saa?
8 Sɛ yɛdɔ Yehowa a, ɛbɛkanyan yɛn ma yɛasuasua Yesu, na yɛadi n’anammɔn akyi pɛɛ. (1 Petro 2:21; 1 Yohane 2:6) Sɛ yɛyɛ osetie ma Onyankopɔn ne Kristo a, yɛda no adi sɛ yɛdɔ wɔn. Yesu kae sɛ: “Nea ɔwɔ m’ahyɛde na odi so no, ɔno na ɔdɔ me. Na nea ɔdɔ me no m’Agya bɛdɔ no, na me nso mɛdɔ no na mayi me ho akyerɛ no pefee.”—Yohane 14:21; 1 Yohane 5:3.
9. Nhyɛso bɛn na ɛsɛ sɛ yegyina ano?
9 Ɛfata sɛ yedwinnwen nea yɛreyɛ wɔ yɛn asetenam ho wɔ Nkaedi bere yi mu. Enti bisa wo ho sɛ: ‘Nneɛma bɛn na mereyɛ de asuasua Yesu? Nneɛma bɛn mu na ɛsɛ sɛ minya nkɔso?’ Ɛho hia sɛ yebisa yɛn ho saa nsɛm yi efisɛ wiase no pɛ sɛ yesuasua wɔn abrabɔ. (Romafo 12:2) Sɛ yɛanhwɛ yiye a, yebesuasua nyansapɛfo, ne wɔn a wɔagye din wɔ anigyede ne agodi mu wɔ wiase yi mu. (Kolosefo 2:8; 1 Yohane 2:15-17) Yɛbɛyɛ dɛn atumi agyina nhyɛso a ɛte saa ano?
10. Nsɛm bɛn na yebetumi abisa yɛn ho wɔ Nkaedi bere yi mu, na dɛn na eyi betumi akanyan yɛn ma yɛayɛ? (Hwɛ mfonini a ɛwɔ adesua yi mfiase no.)
10 Afei, ɛyɛ papa sɛ yebegye bere ahwɛ ntade a yɛhyɛ, video a yɛhwɛ ne nnwom a yetie wɔ Nkaedi bere yi mu. Saa ara nso na ɛsɛ sɛ yɛhwɛ nneɛma a ɛwɔ yɛn kɔmputa anaa yɛn fon so yiye. Bisa wo ho sɛ: ‘Sɛ Yesu wɔ ha na ohuu atade a mahyɛ a, anka m’ani bewu anaa?’ (Kenkan 1 Timoteo 2:9, 10.) ‘Anka me ntade bɛkyerɛ sɛ midi Kristo akyi? Anka Yesu ani begye ho sɛ ɔbɛhwɛ video a mehwɛ? Anka Yesu betie nnwom a mitie? Sɛ Yesu ka sɛ memfa me fon anaa me kɔmputa mma no mma ɔnhwɛ ade wɔ so a, nneɛma a obehu wɔ so no bɛma m’ani awu anaa? Anka ɛbɛyɛ den sɛ mɛka nea enti a m’ani gye video so agodi (video games) bi ho akyerɛ Yesu?’ Ɛsɛ sɛ ɔdɔ a yɛwɔ ma Yehowa no kanyan yɛn ma yɛtow biribiara a ɛmfata Kristoni gu, ɛmfa ho sɛ ne bo yɛ den mpo no. (Asomafo Nnwuma 19:19, 20) Bere a yehyiraa yɛn ho so maa Yehowa no, yɛhyɛɛ bɔ sɛ yɛde yɛn abrabɔ bɛhyɛ Kristo anuonyam. Enti ɛsɛ sɛ yeyi biribiara a ɛbɛma ayɛ den sɛ yebesuasua Yesu no fi yɛn akwan mu.—Mateo 5:29, 30; Filipifo 4:8.
11. (a) Ɔkwan bɛn so na ɔdɔ a yɛwɔ ma Yehowa ne Yesu kanyan yɛn ma yɛyɛ asɛnka adwuma no? (b) Ɔkwan bɛn so na ɔdɔ a yɛwɔ bɛkanyan yɛn ma yɛaboa afoforo wɔ asafo no mu?
11 Ɔdɔ a yɛwɔ ma Yesu kanyan yɛn ma yɛde nsi ka asɛmpa no, na yɛkyerɛkyerɛ afoforo. (Mateo 28:19, 20; Luka 4:43) So wubetumi atoto wo nneɛma yiye, ayɛ akwampaefo boafo na wode nnɔnhwerew 30 anaa 50 ayɛ asɛnka adwuma wɔ Nkaedi bere no mu? Ná onuabarima bi a ɔyɛ okunafo a wadi mfe 84 adwene yɛ no sɛ esiane sɛ ne mfe akɔ anim na onni apɔwmuden nti, ɔrentumi nyɛ akwampae adwuma. Nanso na akwampaefo a wɔwɔ ne mpɔtam pɛ sɛ wɔboa no. Wɔyɛɛ kar ho nhyehyɛe maa no, na wɔmaa no asasesin a ɛbɛn a obetumi ayɛ mu adwuma. Ɛmaa onua no tumi de nnɔnhwerew 30 yɛɛ asɛnka adwuma no. Wubetumi aboa obi wɔ w’asafo mu ma wayɛ akwampaefo boafo adwuma wɔ March anaa April mu? Ɛyɛ ampa sɛ ɛnyɛ obiara na obetumi ayɛ akwampae adwuma, nanso yebetumi de yɛn bere ne yɛn ahoɔden ayɛ pii wɔ Yehowa som mu. Sɛ yɛyɛ saa a, ɛbɛda adi sɛ ɔdɔ a yɛwɔ ma Yesu no akanyan yɛn sɛnea ɛkanyan Paulo no. Dɛn bio na Onyankopɔn dɔ bɛkanyan yɛn ma yɛayɛ?
ƐYƐ YƐN ASƐDE SƐ YƐDODƆ YƐN HO
12. Ɔdɔ a Onyankopɔn ada no adi akyerɛ yɛn no kanyan yɛn ma yɛyɛ dɛn?
12 Nea ɛto so abien, ɛsɛ sɛ ɔdɔ a Onyankopɔn ada no adi akyerɛ yɛn no kanyan yɛn ma yɛdɔ yɛn nuanom. Ɔsomafo Yohane kae sɛ: “Adɔfo, sɛ saa na Onyankopɔn dɔɔ yɛn a, ɛnde na ɛyɛ yɛn asɛde sɛ yɛdodɔ yɛn ho.” (1 Yohane 4:7-11) Enti sɛ yegye ɔdɔ a Onyankopɔn ada no adi akyerɛ yɛn no tom a, ɛnde ɛsɛ sɛ yɛdɔ yɛn nuanom. (1 Yohane 3:16) Yɛbɛyɛ dɛn atumi adɔ wɔn?
13. Afoforo a yɛbɛdɔ wɔn ho nhwɛso bɛn na Yesu yɛ maa yɛn?
13 Nea Yesu yɛe no ma yehu sɛnea yɛn nso yebetumi adɔ afoforo. Bere a Yesu wɔ asase so no, ɔboaa nnipa, ne titiriw no, wɔn a na wɔn asɛm yɛ mmɔbɔ. Ɔsaa wɔn a na wɔyare, mmubuafo, anifuraefo, asotifo, ne mum yare. (Mateo 11:4, 5) Ná Yesu nte sɛ nyamesom akannifo no, ɔno de na n’ani gye ho sɛ ɔbɛkyerɛkyerɛ wɔn a wɔpɛ sɛ wosua Onyankopɔn ho ade no. (Yohane 7:49) Ná Yesu dɔ saa nkurɔfo a wɔn asɛm yɛ mmɔbɔ no, na ɔyɛɛ nneɛma pii de boaa wɔn.—Mateo 20:28.
Wubetumi aboa onua anaa onuawa bi a ne mfe akɔ anim wɔ asɛnka mu? (Hwɛ nkyekyɛm 14)
14. Dɛn na wubetumi ayɛ de akyerɛ sɛ wodɔ wo nuanom?
14 Nkaedi bere nso yɛ bere pa a wubetumi adwinnwen sɛnea wobɛboa anuanom a wɔwɔ w’asafo mu ho, ne titiriw, wɔn a wɔn mfe akɔ anim no. Wubetumi akɔsra anuanom adɔfo yi mu bi? Wubetumi akɔma wɔn aduan, akɔboa wɔn ma wɔayɛ wɔn fie nnwuma, de kar afa wɔn akɔ asafo nhyiam, anaa wo ne wɔn abom ayɛ asɛnka adwuma? (Kenkan Luka 14:12-14.) Ma ɔdɔ a Onyankopɔn ayi no adi akyerɛ wo no nkanyan wo na da ɔdɔ adi kyerɛ wo nuanom!
HU YƐN NUANOM MMARIMA NE MMEA MMƆBƆ
15. Dɛn na ɛsɛ sɛ yegye tom?
15 Nea ɛto so abiɛsa, ɔdɔ a Yehowa ada no adi no kanyan yɛn ma yɛde yɛn nuanom bɔne firi wɔn. Yɛn nyinaa anya bɔne ne owu afi Adam hɔ, enti obiara nni hɔ a obetumi aka sɛ, “Minhia agyede no.” Obi a odi Onyankopɔn nokware paa mpo hia agyede no. Wɔde ɛka kɛse bi akyɛ yɛn mu biara! Adɛn nti na ɛho hia paa sɛ yegye saa asɛm no tom? Yebenya ɛho mmuae wɔ mfatoho bi a Yesu yɛe no mu.
16, 17. (a) Dɛn na ɛsɛ sɛ yesua fi Yesu mfatoho a ɛfa ɔhene no ne ne nkoa ho no mu? (b) Bere a wudwinnwen Yesu mfatoho no ho no, dɛn na woasi wo bo sɛ wobɛyɛ?
16 Yesu yɛɛ mfatoho a ɛfa ɔhene bi a ɔde ɛka kɛse bi kyɛɛ n’akoa ho. Ná ɛka no yɛ denare 60,000,000. Nanso, akyiri yi, saa akoa no amfa ɛka ketewaa bi a na ne yɔnko akoa bi de no no ankyɛ no. Ná ɛka no yɛ denare 100 pɛ. Anka ɛsɛ sɛ mmɔborɔhunu a ɔhene no yii no adi kyerɛɛ n’akoa no ka no ma ɔde ne yɔnko akoa no ka no kyɛ no. Bere a ɔhene no tee sɛ n’akoa no amfa ɛka ketewaa saa ankyɛ no, ne bo fuwii. Ɔhene no kae sɛ: “Akoa bɔne, bere a wosrɛɛ me no mede ka no nyinaa kyɛɛ wo. So ɛnsɛ sɛ anka wo nso wuhu wo yɔnko akoa mmɔbɔ sɛnea mihuu wo mmɔbɔ no?” (Mateo 18:23-35) Sɛnea ɔhene no de n’akoa no ka kyɛɛ no no, Yehowa nso de ɛka kɛse bi akyɛ yɛn. Dɛn na ɛsɛ sɛ ɔdɔ ne mmɔborɔhunu a Yehowa ayi no adi akyerɛ yɛn no kanyan yɛn ma yɛyɛ?
17 Bere a yɛreboaboa yɛn ho ama Nkaedi no, yebetumi abisa yɛn ho sɛ: ‘Onua bi ayɛ me ade ma ayɛ me yaw? Ɛyɛ den ma me sɛ mede bɛkyɛ no?’ Sɛ ɛte saa a, ɛnde saa bere yi paa na ɛsɛ sɛ wusuasua Yehowa a ‘ɔpɛ sɛ ɔde bɔne firi’ no. (Nehemia 9:17; Dwom 86:5) Sɛ yɛn ani sɔ mmɔborɔhunu kɛse a Yehowa ada no adi no a, yɛn nso yebehu afoforo mmɔbɔ na yɛafi yɛn komam de wɔn bɔne akyɛ wɔn. Sɛ yɛannɔ yɛn nuanom na yɛamfa wɔn bɔne ankyɛ wɔn a, ɛnsɛ sɛ yɛhwɛ kwan sɛ Yehowa bɛdɔ yɛn na ɔde yɛn bɔne akyɛ yɛn. (Mateo 6:14, 15) Sɛ yɛde afoforo bɔne kyɛ wɔn a, ɛnkyerɛ sɛ nea wɔde yɛɛ yɛn no nyɛ yɛn yaw, na mmom ɛbɛboa yɛn ma yɛanya anigye kɛse daakye.
18. Ɛyɛɛ dɛn na Onyankopɔn dɔ a wada no adi akyerɛ yɛn no boaa onuawa bi ma onyaa onuawa foforo sintɔ ho abotare?
18 Ebetumi ayɛ den sɛ yebenya yɛn nuanom sintɔ ho abotare. (Kenkan Efesofo 4:32; Kolosefo 3:13, 14.) Nea ɛtoo onuawa Lily yi yɛ ɛho nhwɛso.  (Hwɛ awiei asɛm no.) Lily boaa okunafo bi a ne din de Carol. Ná Lily de Carol tena ne kar mu kɔ baabiara a ɔpɛ sɛ ɔkɔ. Afei, na okodi gua ma no, na ɔyɛɛ nneɛma foforo pii nso maa no. Eyinom a Lily yɛe nyinaa akyi no, na Carol kasa tia no bere biara, na ɛtɔ mmere bi a na ɛyɛ den ma Lily sɛ ɔbɛboa Carol. Nanso, Lily hwɛɛ suban pa a Carol wɔ, na ɔboaa no mfe bi kosii sɛ yare bi a emu yɛ den bɔɔ Carol ma owui. Ɛwom mpo sɛ na ɛyɛ den ma Lily sɛ ɔbɛboa Carol de, nanso Lily ka sɛ: “Mehwɛ kwan sɛ mehu Carol wɔ owusɔre mu. Mepɛ sɛ mihu no yiye bere a wayɛ pɛ no.” Ɛda adi pefee sɛ, ɔdɔ a Onyankopɔn ada no adi akyerɛ yɛn no betumi akanyan yɛn ma yɛne yɛn nuanom atena asomdwoe mu, na yɛahwɛ bere a nnipa sintɔ befi hɔ koraa no kwan.
19. Dɛn na ‘akyɛde a enni kabea’ a Onyankopɔn de ama yɛn no bɛka wo ma woayɛ?
19 Yehowa ama yɛn ‘akyɛde a enni kabea’ ampa. Momma yɛnkyerɛ ho anisɔ bere nyinaa! Nkaedi bere yi ne bere pa a ɛsɛ sɛ yedwinnwen nea Yehowa ne Yesu ayɛ ama yɛn no nyinaa ho. Ɛmmra sɛ ɔdɔ a wɔada no adi akyerɛ yɛn no bɛka yɛn ma yɛasuasua Yesu yiye, ada ɔdɔ adi akyerɛ yɛn nuanom, na yɛafi yɛn komam de wɔn bɔne akyɛ wɔn.
^  (nkyekyɛm 18) Wɔasesa edin ahorow no bi wɔ adesua yi mu.
Sɛ yedwinnwen agyede a Yehowa fi ɔdɔ mu de akyɛ yɛn no ho yiye a, ɛbɛka yɛn anaa ɛbɛma yɛasuasua Yesu. Sɛ yegye agyede a Yehowa fi ɔdɔ mu de akyɛ yɛn no tom a, ɔdɔ a Onyankopɔn ada no adi akyerɛ yɛn no bɛkanyan yɛn ma yɛakyerɛ akyɛde no ho anisɔ. Afei nso, yebesuasua Yesu yiye
Nkaedi Bere: Ɛyɛ bere a aka kakra ma Nkaedi no adu, bere a yedi Nkaedi no ankasa, ne Nkaedi no akyi. Ɛtɔ mmere bi a, esi March, April, anaa May asram no mu